Nke a nwere ike ịbụ ọhụrụ mmanya igodo gam akporo | Gam akporosis
N'oge na-adịghị anya, agba ahụ ga-eru bọtịnụ igodo gam akporo
Ogwe igodo gam akporo enwetabeghịrị na ụdị ndị a kachasị ọhụrụ na ọ bụ otu n'ime bọtịnụ ndị anyị na-emetụkarị ka anyị si n'otu ngwa gaa na nke ọzọ site na nso nso a ma ọ bụ bọtịnụ ụlọ iji gaa na ihuenyo mbụ ebe anyị nwere ngwa niile na ụzọ mkpirisi anyị ji eme ihe.
Site na ihe anyị maara, nke sitere na isi mmalite nke enwere ike iwere dị ka eziokwu, Google Nexus ọhụrụ ga-adị njikere ịnata mmanya igodo ya na obere ndozi na imewe. Agba na otu n’ime animations ndị ahụ mara mma, nke gam akporo na-enwetakarị n’oge na-adịbeghị anya, ga-eme ka ọ dị maka ụfọdụ bọtịnụ emezigharị.
Dị ka isi iyi, agba agba ohuru ohuru ọ animates mgbe ọ na-enweta ogologo pịa, na agba dị iche iche na-agbasawanye dị iche iche ruo mgbe ha na-agbakọta n'èzí. A pụkwara ịhụ na bọtịnụ niile ugbu a anaghị anọgide na-apụta, nke na-enye akụkụ ọhụụ ọzọ maka ogwe ntụgharị a mere ọtụtụ ndị nrụpụta si na nke anụ ahụ na ekwentị ha.
Naanị ihe anyị nwere ugbu a bụ onyonyo ị ga - ahụ na bọtịnụ ụlọ emezigharị. Ihe anyị na-amaghị bụ na ọ bụrụ na nke a bọtịnụ ọhụrụ ga-abụ akụkụ Android N ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-abụ maka ngwaọrụ ndị ọzọ nwere Android N mgbe ndị nrụpụta na-emelite ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na anyị kọọrọ akụkọ a ya na ndi ozo anyi nwere taa, nke ahụ na-emekwa ka anyị nọrọ n'ihu ya smartphone nke Google n'onwe ya kere, Anyị nwere ike ihu na interface na akara Google nke ga-enwe oke oke dị iche maka ihe ngwaọrụ mkpanaka ahụ ga-abụ, nke nwere ike ịbụ otu akụkọ kachasị mkpa n'afọ, ọ bụrụ na Telegraph ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'oge na-adịghị anya, agba ahụ ga-eru bọtịnụ igodo gam akporo
Android N agaghị enye ọnọdụ ọtụtụ windo na ndabara na Nexus
Foto Google na-emekọrịta foto ehichapụ na ngwaọrụ site na ngwa ndị ọzọ